IThames & Kosmos Chem C3000 yeKhemistry Kit Review
I-Ultimate Chemistry Kit eqhubeka isetyenziswa ngamaKhemikhali oqobo
I-Thames kunye neKosmos zivelisa iikiti zenzululwazi ezininzi, kuquka iiseti ezininzi zeekhemistri. I-Chem C3000 yiyona nto yokugcina ikhemiti. Imfundo yeKemistry kunye namalayibesi baye batyelela kwiikhompyutheni zekhompyutheni kunye nekhompyutheni ekhuselekileyo, ngoko kunzima ukufumana ikiti ebonisa iintlobo zezandla-kwiivivinyo ezibeka umgangatho wemibhobho yamakhempi kwixesha elidlulileyo. I-Chem 3000 yenye yeekhitshi ezimbalwa zeekhemikethi kwimarike namhlanje equlethe iikhemikhali kunye nezixhobo eziyimfuneko ukuba zenze iziphumo ezingaphezulu kwe-350 eziphakamileyo zezikolo / eziphambili.
Le yintsimbi eyaziwayo kakhulu yechemistry yamakhemikhali asekhaya kunye nokuzifundisa.
Le yiyona nto yokugcina ikhemiti! Ikhamera yeThames neKosmos Chem C3000 iqukethe yonke into yeKhem C1000 kunye neek Chem k2000, kunye nezinye iikhemikhali kunye nezixhobo. Uyakwazi ukwenza iimvavanyo ezingaphezulu kwama-350.
Ikiti iza kwibhokisi equkethe iipayipi ezimbini zokupakisha i-styrofoam. Inkampani inelungelo lokwenza utshintsho lobuchwepheshe kwiikiti, ngoko akukho ndawo eninzi ekuhleni uluhlu oluchanekileyo kwibhokisi endifumeneyo, kodwa ndiya kuthi yayiquka ibhodi yebrabhu yombala wephepha eli-192, iiglasi zokukhusela, izigxiba ukubethelwa kweekhemikhali, iibhawuni zokuvavanya, i-tube holder kunye ne-test brush tube, i-funnel, i-beakers, i-pipettes, i-stopper, i-alcohol burner, i-tripod stand, i-electrodes, iibhotile ezimdaka zokugcina imichiza ekhanyayo, i-rubber hoses, i-glass tubing , iphepha lokucoca, isitya esikhulayo, i-Erlenmeyer flask, i-syringe, i-litmus powder, i-assmus yezinye iil lab, kunye nezikhonkwane ezininzi zeekhemikhali.
Njengoko unokulindela, akukho nto inobungozi ngokubhekiselele ekulahleni kwenkunkuma (umzekelo, akukho i-mercury, i-carbon tetrachloride, njl.), Kodwa isicwangciso esicwangcisiweyo, esenzelwe ukuzakhela izandla, kwi-school-chemistry.
Uvavanyo luzisa umphandi ukuba asebenzise ngokufanelekileyo izixhobo zobungcali zekhemistri kunye nokujonga i-chemistry jikelele kunye nezinto ezibalulekileyo zokuqala.
Isiphakamiso sexesha: 12+
Le isethi yabafundi abaphakathi kunye nabaphakamileyo. Akuyiyo ikiti yokuchithwa kwemithi yabantwana abancinci. Nangona kunjalo, akudingeki ukuba ube nolwazi oluphambili lwe-chemistry ukusebenzisa isethi.
Incwadi yokufundiswa yenzelwe njengebhayibhile. Isahluko ngasinye sibonisa isingeniso, uludwe olucacileyo lweenjongo, inkcazo yeengcamango, imiyalelo yesinyathelo-nge-nyathelo, imibuzo yokusebenza ukuqinisekisa ukuba uyaqonda ukuba kwenzekani, kunye nokuvavanya.
Akunzima - ufuna nje ukuqonda i-algebra esisiseko kunye nokukwazi ukulandela izikhombisi-ndlela ukuze ukwazi ukuyiqonda. Imifanekiso encwadini izuko kwaye icatshulwa kulula ukuyifunda. Kuyonwabile kwaye kuhla-phantsi komhlaba, kungekhona amaphepha angabonakalisi amabalo kunye negrafu. Ingongoma kukubonisa indlela imichiza emnandi ngayo!
I-Pros and Cons ye-Chem C3000 Kit
Ngokomntu, ndicinga ukuba i-'pros 'yale nto ikhatheka kakhulu kunene, kodwa kufanele ukwazi ukuba ungena phi ngaphambi kokuba unqume ukuba le yikiti yokuzikhangela. Ingxaki enkulu ngaphandle kweendleko mhlawumbi kukuba le yikiti elibi. Kukho iingozi xa usebenzisa kakubi iikhemikhali, kukho ilangatye, kwaye kukho izibalo ezibalulekileyo kwizibalo. Ukuba ukhangele isingeniso kwikhemistry kubaphenyi abaselula kakhulu, kuya kuba ngcono ukukhetha isethi esifanelekileyo.
Ifanelekile kwiqumrhu lebhu labasebenzi bezakhiwo zasemakhaya zasesikolweni esiphakeme.
Uninzi lweekhemikhali; ezininzi iinzame. Ngeke usebenze kule setethi ngeyure okanye ngeveki.
Incwadi yokufundisa iyimfuneko, imifanekiso yembala, imiyalelo ecacileyo kunye neengcaciso ezichaziweyo zeemithi.
Kubandakanya i-lab kunye nezixhobo zokukhusela, kungekhona nje iikhemikhali, ukwenzela ukuba uqhubeke nokuvavanya kwaye ibhu lab isebenza ngaphaya kwemiyalelo. Unokuyalela amachiza angaphezulu ukusuka kwiThames & Kosmos okanye uzikhethe wena ngokwakho.
Ixabiso! Ufumana ezininzi kule kethi, kodwa ngokuqhelekileyo ujikeleze i-$ 200. Ukuba oko kungaphandle kwinqanaba lebhajethi yakho, unokuqwalasela enye yeekiti ezincinane zeThames neKosmos. Umgangatho ufana, ngaphandle kweekiti, ezingabizi kwaye zigqithise iimvavanyo ezimbalwa. Okanye, ukuba unesabelo-mali esiqinileyo, kutheni ungahlanganisi iikiti zakho kwiikhemikhali zasemakhaya ?
Izinto ezongezelelweyo ezifunekayo. Ukugqiba yonke into yokuzama, kuya kufuneka uthathe ibhetri ye-9-volt kunye neekhemikhali ezongezelelweyo ezingezo zifakiwe kwiikiti, ngokuyinhloko kuba zichaneke okanye zinokuphila kwesikhaliso esifutshane. Ngethamsanqa, ezi khemikhali ayinzima ukufumana inthanethi. Ngokukodwa, iikhemikhali ezongezelelweyo ezifunekayo ukuba inkampani ayikwazanga ukuthunyelwa ngokusemthethweni kwikiti yile:
Isisombululo se-nitrate yesilivere ye-1%
I-4% ye-sodium hydroxide isisombululo [fumana i-intanethi]
~ 7% i- hydrochloric acid (i-muriatic acid) [fumana i-intanethi]
3% i-hydrogen peroxide (ngokuqhelekileyo amandla esitolo sezilwanyana) [fumana i-intanethi]
~ 3% i-ammonia (i-diluted house ammonia) [fumana i-intanethi]
Iimichiza ezongezelelweyo / izinto oza kuzifuna zi:
utywala utywala (ukuxuba utywala)
i-baking soda (i-sodium bicarbonate)
i-citric acid [fumana i-intanethi]
i-ammonium carbonate [fumana i-intanethi]
Unokufumana ukuphazamiseka kokuthumela. Uninzi lwabantu luyalela le kethi kwi-intanethi. Iza kakuhle-ihlanganiswe kwaye i-mine ayizange iphule, nangona i-FedEx iphosa emnyango wangaphambili, kodwa abanye abantu baye babika ukufumana i-glassware ephukile. Iikhemikhali ziza kwizikhuni zeplastiki, ngoko zikhuselekile, kodwa ziyi-tubes zokuhlola kunye neebhotile zeglasi, ngoko kuya kwenzeka. Ingcebiso yam kukuba kuthunyelwe ngomthengisi oya kutshintsha nayiphi na into eyonakalisiweyo.
I-Luminol Test Chemiluminescence Test for Blood
Iingcebiso zoKhuselo oluKhuselekileyo oluKhuselekileyo
Xa Ukwazi Ukuhlaziya Iincwadi NgeSpanish
Amanani aseJamani kunye nokubala ukusuka ku-0-20
I-Kinetic Molecular Theory yeGesi